Otu matring matraasi na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Mepụta afọ gara aga, Rayson bụ onye na-emepụta ọkachamara na kwa onye na-eweta ike siri ike na mmepụta, chepụta ya, na R & D. Otu osila dị ụkọ na-etinye ọtụtụ ihe maka mmepe ngwaahịa na ndozi oke ọrụ, anyị edobela aha dị elu na ahịa. Anyị na-ekwe nkwa inye onye ahịa ọ bụla ndị ahịa n'ụwa niile na ọrụ ọrụ aka na-ekpuchi ihe ndị ahịa, ahịa na ọrụ ahịa. N'agbanyeghị ebe ị nọ ma ọ bụ azụmahịa ị na-etinye aka, anyị ga-enwe mmasị inyere gị aka imeri okwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.Thipụta ngwaahịa achọrọ. Akụkụ nke akwa ahụ agaghị agbanwe ngwa ngwa mgbe ịcha ma ọ bụ nhazi / mgbochi mmiri.